नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : ब्राजिलबाट फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कुनै पनि हालतमा पदबाट राजीनामा नदिने बताए
ब्राजिलबाट फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कुनै पनि हालतमा पदबाट राजीनामा नदिने बताए
भट्टराईले भने, ‘कसैले माग्दैमा राजीनामा दिने कुरा आउँदैन । प्रधानमन्त्री पद भनेको बच्चाको खेलौनाजस्तो होइन । कसैले माग्दैमा खुरुक्क पद छाड्ने र कसैले भन्दैमा चुपचाप लागेर बस्ने कुरा आउँदैन ।’ उनले आºनो राजीनामा माग गरिनुलाई बालहठको संज्ञा दिए । ‘केही नेताले साना बच्चाले हठ गरेजस्तै राजीनामा मागिरहेका छन्,’ भट्टराईले सञ्चारकर्मीलाई भने, ‘बालहठ गर्ने केटाकेटी थाकेपछि चुप लागेर बस्छन् । तपार्इं कहिले राजीनामा दिने भनेर बालहठजस्तो एकोहोरो प्रश्न नगर्नुहोस् । सबै कुरा बुझेर पनि नबुझेजस्तो गर्नुको
अर्थ छैन ।’
कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले त्यसको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउनुको कारण सरकारसँग माग गरेको हो ।